'व्यवस्था फरक, अवस्था उस्तै' कहिले महसुस गर्ने जनताले सुशासन ? - Everest Dainik - News from Nepal
‘व्यवस्था फरक, अवस्था उस्तै’ कहिले महसुस गर्ने जनताले सुशासन ?
समाजवादसम्म पुग्न जनपार्टी हुनैपर्छ, अनिमात्रै जनताले जनसत्ताको प्रत्याभूति गर्न पाउने छन्, सुशासनका भोका अनि समाजवादका आश्वासनले लठ्ठ परेका नेपाली जनताहरुले यही चाहेका छन् ।
हिजो देशले जे-जति सहन गरेको थियो,जे जस्तो बलिदानी व्यहोर्नुपरेको थियो आजको युग ल्याउनलाई पक्कै पनि थिएन । ठोकुवा गरेर भन्छु म मेरो स्वविवेकले कि हिजो बन्दुकको नालबाट जनताको राज्यसत्ता जन्मिन्छ भन्ने विश्वासले लडेका ती अजर अमर सहिदहरुको विश्वासले जनताको राज्यसत्ता ल्याउदै ल्याएन, ल्यायो त केवल पूँजीवादी दलालहरुलाई मलजल हुने सत्ता, यसैले त हाम्रो संविधान अधुरो, अपुरो र विकलाङ्ग छ।
प्रधानमन्त्री तपाईंको स्पिरिटले ऐतिहासिक भनिएको निर्वाचनको जगमा प्राप्त कुर्सीलाई कसरी यति छिटो बिर्सियो र जनताको उपभोग्य सामग्रीबाट पनि जनताको ढाडमा दाल दल्दै हुनुहुन्छ ?
जहाँ विकलाङ्गहरुले पनि आकाशमा जेट उडाएका छन तर विकलाङ्ग संविधानले धर्तीमा सेफ ल्यान्डिङ हुन सकेको छैन । बरु जबर्जस्त लाद्न खोजिएको छ । संविधान, पूर्णतया जनप्रेमले पोख्त छैन अनि आज कोही संसदीय व्यवस्थाले बिच्किए, कोही पदीय हैसियतले खुम्चिए अनि जनपार्टीको जनसत्ताको सपना मधुरिदै बिलय हुँदैछ र त जनताको ढाडमा दाल दल्ने शोषक र सामन्ति रबैयाका बजार भाउ र सत्ता विलासका भोका भुँडीहरु उस्किन प्रयत्न गर्दैछन ।
जनताको गरिबीले दावा लागेको भुँडीमा भाला धस्दैछन् रक्तपिपासुहरु, जनयुद्धका जासुसीहरु भने विडम्बनादाय
मोटाइले मोटाउँदै छन । तसर्थ महान बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई जबर्जस्त सेफ ल्यान्डिङ गर्न खोजिदै छ। जनताका भावनाहरुमाथि कुठाराघात गर्दैछ वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले ।
यी हरफहरु कोर्दै गर्दा राष्ट्रवादको नाराले चर्चित बन्न सफल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्झन चाहान्छु ।
प्रधानमन्त्री तपाईंको स्पिरिटले ऐतिहासिक भनिएको निर्वाचनको जगमा प्राप्त कुर्सीलाई कसरी यति छिटो बिर्सियो र जनताको उपभोग्य सामग्रीबाट पनि जनताको ढाडमा दाल दल्दै हुनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्री ज्यू, तपार्इलाई जति नै प्रश्न गरेपनि उत्तर नै प्राप्त नगरी हाम्रा प्रश्नहरुलाई ढुंडी पार्ने कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ ?
हिजो निर्वाचनमा मत माग्न जाँदा प्रकाशित गरिएका घोषणापत्र के जनतालाई देखाइएको ललिपप थियोरु ललिपप त पाँच रुपैयाँमा प्राप्त गर्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू , के करोडौं रुपैयाँ राज्यको बजेट ध्वस्त गरेर छाप्पिएका घोषणापत्रहरु तपार्इका रमाइला चुट्किलामात्रै थिए ? या जनताको भावना माथी कदरका लागि प्रवाह गरिएका विकासका शपथहरु थिए ? तपार्इहरु सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर आफ्नै सेवा अनि सुविधाको सपना बुनिरहनुभएको छ या जनताका समस्याहरुलाई जगको रुपमा देखाएर निजी दरबार र सुखको धरहरा निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ रु यो प्रश्नको जवाफ यो पंक्तिकारले मात्रै चाहेको छैन सिङ्गो मुलुक र राष्ट्रले तपाइबाट जबाफको अपेक्षा गरेको छ प्रधानमन्त्री ज्यू त्यो पनि उखान र भाषणबाट होइन, कामबाट हेर्न आतुर छन्, नेपाली जनता ।
याे पनि पढ्नुस ब्राजिलमा के गर्दैछन् कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी ?
तपाईं पहिलो पटक उपहार सत्ताको मालिक बन्दा यो देशले के पायो ? तपाईं बहुदलीय प्रजातन्त्रको एक दलको ठूलो पदासिन व्यक्ति हुदा महाकालीको खेलबाहेक जनताले अँध्यारो सिवाय के पाए ?
नेपालको पानी भारतलाई बेचेर, नेपालको नदी भारतलाई सुम्पेर देशलाई अँध्यारो र गुमराहमा पार्ने बाहेक तपाईंको राजनीतिले देशलाई के दियो ? मात्रै हावाबाट बिजुली निकाल्ने दिवा स्वप्न भने बाडिरहयो । ताका छोराछोरीले रगत बगाएका केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर सपना र कथाहरु सुन्नमात्रै पक्कै होइन, केपी ओलीले यो नेपाली सत्तामा चिठ्ठा हातमात्रै पारेनन उनले त मौकाको फाइदा उठाइरहे, कुनै समय स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम सदैव जोडिएर आउँथ्यो, अहिले उनै पुराना गिरिजाको नाम दर्ज गर्दैछन, ओली नेतृत्वको सरकारले के यो महान् बलिदानीको अभिमत दिएको हो ?
यहि प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोध्न चाहन्छु ।
हामी अन्धकारबाट उज्यालोको सपना देख्ने नागरिक
तपाईं उज्यालोलाई अँध्यारो बनाउन खोज्ने अभियन्ताबाहेक जनताले हाँस्यास्पद उखान र टुक्का मात्रै सुनिरहे । देश समृद्ध र सुशासनयुक्त बनाउन ५ वर्ष भनेको धेरै लामो अवधि हो । तर, यहाँ मदनकुमार भण्डारीको फोटो लिलाम गर्नेहरु बढे, बरु मदनको सपनालाई ‘कू’ गर्नेहरु एकपछि अर्को थपिए । आखिर किन मदनलाई दुरुपयोग गर्दैछन ? मदनलाई सच्चा श्रद्धाञ्जली दिन नसक्नेले १७००० को श्रद्धाञ्जली कसरी देलान् ? यो देशले मागेको जवाफ हो, मैलेमात्रै होइन।
व्यवस्था हिजो र आज बदलिएको छ, निश्चय नै यो कुनै टुक्काले बदलिएको छैन।मात्रै सहिदको बलिदानीको जगले हो । हिजोको व्यवस्थाको मुख्य नाइके हटेपनि त्यही नाइकेका चाकडीहरु आज जतासुकै राज्यको बजेटको डाडु पन्यु बनेका छन र त गणतन्त्रलाई सम्मान भन्दा उपहास ,जनतालाई सम्मान भन्दा अपमान र खेलाँची गर्दैछन् । आखिर किन र कहिलेसम्म ?
निर्वाचन मुलुकमा एकपटक मात्रै आउँदैन । पाचवर्ष पर्सी आइपुग्छ त्यतिबेला के देखाउनुहुन्छ तपाइहरुले जनतालाई र माग्नुहुन्छ भोट ? सोचनीय सवालहरु एकपछि अर्को जन्मिनु विडम्बनाका भेलहरु जस्तो लाग्छ।
आज मुलुकले सारा विश्वको तेश्रो ठूलो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी पाउदा जनता खुसी हुनुपर्नेमा जतासुकै निराशा पैदा भएको छ, कुन्ठाले नेपाली राजनितिका शुभचिन्तकहरुको मन अमिलिएको छ । जनता हतोत्साहित भएपछी राज्य निरुत्साहित हुन विवश होला, गम्भीर ध्यानाकर्षण होस महोदयहरु । हिजो हामी धेरै दबिएर पिल्सिएका थियौं ।आज हामी पिल्सिएर उछिटिन लागेका स्प्रिङजस्ता हुदैछौं,कुनै समय यस्तो नआओस कि नेपाली युवा शक्तिले एउटा सत्ताको बर्बादी गरेर जनसत्ताको निर्माण गर्न परोस्। अत्याचार बढ्दै गयो, तस्करहरु मौलाउँदै गए, अपराधीले राज्यको दौरासुरुवाल पहिरिरहयो भने उसको पोशाक च्यातेर पुत्ला दोहन गर्न युवा सडकमा आए भने प्रतिरोधको आन्दोलनले अब साधारण र निमुखालाई उडाउने छैन बरु सत्ताका खियाहरुका लागि मट्टीतेल बन्नेछन नेपाली युवा, बेलैमा सोचियोस् ।
भारतबाट मोदी नेपाल आउनुहुँदैन सहयोगको भिख माग्छ सरकार, उता भारतले सीमा मिच्छ, आफ्नै नागरिकलाई धरपकड गर्छ तर किन मौन भर्इ ओथारो बस्छ नेपाल सरकार रु जनता अनभिज्ञ छन्, अनि हामी युवा सचेत छौं । यहाँ तँ रोएजस्तो गर म कुटेजस्तो गर्छु भन्ने रबैया हावी छ र त लम्पसार मौन म स्विकृतमा लक्षणमको प्रत्याभूति गर्न जनता विवश छन् । यस्तो किसिमको राष्ट्रभक्तिमाथि बेवास्ता गर्ने रबैयालाई के भनेर विश्लेषण गर्नेरु जनतालाई जवाफ देउ ! हामी तिम्रो झु र चिल्ला अनि स्पाइसी आश्वासनको रेडियो सुन्न लालयित किमार्थ छैनौं ।
आज मुलुकले सारा विश्वको तेश्रो ठूलो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी पाउदा जनता खुसी हुनुपर्नेमा जतासुकै निराशा पैदा भएको छ, कुन्ठाले नेपाली राजनितिका शुभचिन्तकहरुको मन अमिलिएको छ । जनता हतोत्साहित भएपछी राज्य निरुत्साहित हुन विवश होला, गम्भीर ध्यानाकर्षण होस महोदयहरु ।
कर्मकाण्ड टुक्कामा अलमलिदैनौं, हामी जनताको उद्धार र संरक्षण गर्ने ब्यक्तित्वको सत्ताको प्रतीक्षामा सुस्ताइरहेका छौं।त्यसको प्रत्याभुती बर्तमान सरकारले जनतालाई गराउनै पर्छ।जनताको दाल चामलबाट लुट्ने लुटेरालाई पनि सिन्डिकेटको जस्तो कारबाहीअघि बढाउनुपर्छ, देशमा लुटको राज जनता चाहदैनन् । जनता सुशासन चाहन्छन,जनता भ्रष्टको अन्त्य भएको हेर्न चाहन्छन, दलालको लास बलेको देख्न चाहन्छन । अनिमात्रै हाम्रो देशको सगरमाथाले आफ्नो गरिमा उपर गौरव गर्न पाउने छ ।त्यस्तो दिन ल्याउने नेता यो देशले जन्माएको होला र ? हामी यसैको लागि हाम्रा कलमका मसीहरु बगाइरहेका छौं। जनताका छोराछोरीले रगतको खोलो बगाएर ल्याएको उपलव्धिमा रगत अझै लत्पतिएको छ।त्यो रगत सफा गर्न पनि सुशासन अत्यावश्यक छ, मनन गरियोस ।
घाइतेले उपचार अभावमा मर्न विवश हुनु,गरिबले सिटामोल अभावमा मृत्युवरण गर्न बाध्य हुने परिस्थिति, युवाहरु बेरोजगारीको नाममा लिलाम हुन विवश अवस्थालाई गम्भीरता पूर्वक नलिइ अझै रेमिटेन्सले फुल्न नसकेको भुँडी जनताको रगत पिउन अभ्यस्त मुल्यवृद्धि विरुद्ध हामी गहिरो खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौं, लुटतन्त्रका मतियारहरु विरुद्ध ।
देशका सिमा र भुगोलको परवाह गर्न ओली सत्ताले कहिल्यै जान्दैन बरु सिमा मिचिदाँ उ आफूलाई राष्ट्रवादको भ्रम छर्छ, तस्तो कुकृत्य किन ? मलाई यी प्रश्नहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्री सामु उपस्थित भएर प्रत्यक्ष सोध्ने इच्छा छ तर सोधेर मुखमात्रै दुख्ने व्यक्ति सत्ताको मालिक छ भने हाम्रा प्रश्नहरुले काम गर्लान र ? मनमनै हामी प्रश्न गर्दै, तिनै प्रश्नहरुलाई हत्या गर्न बाध्य छौं, आखिर कहिलेसम्म ?
फ़ेरि आउने छ, अर्को माघ अनि त्यो जाडोमा न्यानो खोज्दै तपाईं जनताको घरदैलोमा धाउनुपर्ने छ त्यो बेला जनताले तपाईं र तपाई नेतृत्वको सरकारको कार्य मुल्यांकन गरि हिसाब दिने छ ।
नेपाली जनता सु-स्पष्ट राज्य व्यवस्थामात्रै चाहन्छन् । वाहियात उखान र टुक्का सुन्न कोही पनि लालयित छैन । जनता भरोसा गरेर बसेका छन, अब ओली जस्तो राष्ट्रवादी नेता प्रधानमन्त्री भएका छन, कस्तो सन्देश प्रवाह गर्लान हामी जनता हेर्न छौ । तर, ओलीले पहिलो झाप्पड मुल्यवृद्धिसँगै जनतालाई दिए । यस्तो चरम घात नगर्नुहोस ओली ज्यू, जनता भनेका जनार्दन हुन् ।
तपार्इको सेना र पुलिसभन्दा शक्तिशाली बिना हतियारका राष्ट्ररक्षकका पकड र कट्टर भरोसा तिनै जनता हुन, बेवास्ताका हर्कत र चुनावी घोषणापत्रलाई लिलाम गर्ने दुस्साहस नगर्नुहोला एउटा माघले जाडो जादैन । फ़ेरि आउने छ, अर्को माघ अनि त्यो जाडोमा न्यानो खोज्दै तपाईं जनताको घरदैलोमा धाउनुपर्ने छ त्यो बेला जनताले तपाईं र तपाई नेतृत्वको सरकारको कार्य मुल्यांकन गरि हिसाब दिने छ । त्यसैले समय धेरै छ सुध्रनुस सुधार्नुस् तपाईंले बाँडेका सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा व्यवहारिक बनाउनुस् शुभकामना।
ट्याग्स: sushan acharya